Isibhengezo sokudibanisa inkampani
ngomphathi ku 21-06-13
Mholo! Abahlobo bethu abathandekayo, abathengi abatsha nabadala! Enkosi kwinkampani yakho apha endleleni! Ngenxa yokudityaniswa kweshishini lenkampani yeqela lethu! IYancheng Tianzhihui Mat Co, Ltd. kunye neYandu Tianhui Umzi mveliso weZinto zeMidlalo phantsi kweqela lethu malunga nokudibanisa nokusebenza. Igama elitsha emva kwe ...
Iimpawu zeemathiriyeli ze-eva foam kunye nezikhuselo
I-EVA foam floor mats ziye zasetyenziswa ngokubanzi emsebenzini nakubomi, kwaye zinokubonwa emakhaya, kwiindawo, kwiziko lomthambo nakwezinye iindawo. Ukuveliswa kwezinto ze-EVA kusetyenziswa imethi yomgangatho kunezibonelelo ezininzi. Umzekelo: ukuxhathisa ukothuka, ukungangenwa ngamanzi, ubungqina bombane, njl. Sazise nge-EVA ...
Olunye uluvo malunga nemethi yelineni yelinen
Ilinen yoga mat yimethi ye-yoga enemigca. Ihlaziywa ngokusekwe kumgangatho weyoga yemveli. Isebenzisa inkqubo ye-orthographic yoga ukuprinta umlawuli kwingqondo yomhlohli weyoga kumphezulu womgangatho ukunceda iingcali zenze ii-asanas ezichanekileyo zeyoga. Kukwalungele ...
Uyigcina njani i-TPE yoga mat
Xa sisebenzisa i-yoga ngamandla, ulusu lunonxibelelwano oluninzi kunye ne-TPE yoga mat, kodwa ukuntywiliselwa kokubila kwenza ukuba i-TPE yoga mat kube lula ukuzalisa iibhaktheriya, kwaye ukucocwa kwe-TPE yoga mat akunakuhoywa. Ke siyicoca njani i-yoga mat? 1. Khetha i-TPE efanelekileyo yeg ...
Kutheni usebenzisa i-TPE yoga mat yokuziqhelanisa neyoga
Xa sisenza imithambo yeyoga, kufuneka sikhethe mat efanelekileyo yeyoga ukunceda. Mhlawumbi abanye abahlobo baya kuthi: "Ndingasebenzisa nje ingubo okanye ukonyuka komntwana?". Oku kunokuthetha ukuba awazi kakhulu ngeyoga, kwaye awazi kakhulu ngomzimba wakho. ...
Isibhengezo seholide sonyaka we-2021 weNtwasahlobo
ngomphathi ku 21-02-10
Maqabane othandekayo ekhaya nakumazwe aphesheya: Enkosi ngenkxaso yenu kulo nyaka. Ixesha lethu leholide liqala ngo-2021-02-05 ukuya ku-2021-02-18. Ngomhla wesibhozo wosuku lwesibhozo lomsebenzi, ukuthunyelwa okuqhelekileyo kunokwenziwa. Ngexesha loMnyhadala weNtwasahlobo, ixesha lokuhambisa liza kucotha, ke ixesha lokuhambisa linokuba s ...
Indlela yokukhetha ibhendi yokumelana
ngomphathi ku 21-02-09
Amabhendi okumelana nawo abizwa ngokuba ngamabhanti okumelana nokuqina komzimba, amaqela oxinzelelo lomzimba okanye amaqela e-yoga. Ngokuqhelekileyo zenziwe nge-latex okanye i-TPE kwaye zisetyenziselwa ukusebenzisa ukumelana nomzimba okanye ukubonelela ngoncedo ngexesha lokuzilolonga. Xa ukhetha ibhendi yokumelana, u ...
xpe ezirhubuluzayo mat kunye epe ezirhubuluzayo mat mat
Umntwana simkhathalela ngononophelo olukhulu. Kwiinyanga ezimbalwa emva kokuba umntwana ezelwe, umntwana uya kuqala ukufunda ukukhasa ngokulula. Ngeli xesha, umgangatho wokukhasa osemgangathweni ofunekayo uyafuneka ukunceda umntwana afunde ukukhasa nokukhusela umntwana ekuweni ngengozi kunye nokwenzakala ngexesha lale nkqubo. B ...
Ukuthetha nge-TPE Yoga Mat
Imethi yeYoga ngoku yahlulwe yaziindidi ezimbini: imethi yemveli yeyoga kunye neekethi ezintle zeyoga. Imethi yeyoga yemveli ayinayo imigca, kwaye ngokubanzi ineziphumo zokhuselo kuphela, anti-slip kunye nokuzahlula, ngelixa ii-mats ezintle ze-yoga zinemigca. Kukwiimethi zemveli zeyoga. Ngokwe-inno ...
Malunga ne-TPE yoga mat ephetheyo kunye ne-anti-slip intshayelelo ephathekayo
Ngokwesiqhelo iyoga iyakulungiselela imethi ezimbini, enye ibe yeyasekhaya enye ibe yeyokuziqhelisa ngaphandle. Ukuphatheka kwe-TPE yoga mat ekhaya kungahoywa, kodwa imati kufuneka kube lula ukuyiphatha. Okokuqala, ubunzima kufuneka bube lula. Iimpawu ezininzi ziya kuvelisa i-1.5-3mm yokuhamba kwe-TPE yoga mat, enokuthi ...
Bungakanani ubungakanani bomgangatho we-TPE yoga mat
Ubungakanani bemigangatho ye-TPE ye-yoga yamazwe aphesheya ubukhulu becala yi-61cmx173cm kunye ne-61cmx183cm. Kodwa okwangoku, eyona mveliso iphambili yasekhaya isese-61cmx173cm. Kukho nezinye iinkcukacha. Imethi ye-yoga ye-TPE ethunyelwa ngaphandle eJapan ngama-65x175cm. Ukutyeba TPE yoga mat?
Umgangatho oQinisekileyo wePuzzle, iphazili yomthambo, Ingxowa yeYoga yeSling, Ingxowa yeYoga yokuHamba, I-Yoga Mat enetawuli ephezulu, Ingxowa yeYoga Mat yokuHamba,